CELUM mandroso fitantanana fananana nomerika | Martech Zone
Nanoratra momba ny tanjon'ny Digital Asset Management ny rafitra sy ny fahafahan'izy ireo manampy amin'ny fiarovana ny marika sy ny fandefasana hafatra, manome motera azo karohina hitadiavana atiny, ary koa fitaovana hanovana ireo karazana haino aman-jery hampiasana amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa. Ireo mpivarotra mandroso aza dia mampiasa ny rafitra hanaraha-maso ny varotra sy ny lalam-barotra ary koa ny fahombiazan'ny varotra.
Na dia rafitra DAM maro hafa aza dia rafitra rakitra be voninahitra izay tsy manatsara ny fizotrany. CELUM dia natsangana mba ho ivon'ny atiny. Izy io dia afaka mihetsika toy ny hoe ny ERP, CRM, PIM na tranokala fitantanana votoatin'ny tranokala ary mamela ny famoahana votoaty mivantana amin'ny fantsona maro.
Ny sehatra dia mamela ny marika mamolavola pejy fidirana azy manokana, ny dashboard ary ny sehatr'asa - hitan'ny mpampiasa anatiny sy ivelany. Ny mombamomba ny interface isan-karazany dia tantanana miaraka amina endrika mahazatra, izay azo namboarina ho an'ireo vondrona mpampiasa isan-karazany amin'ny alàlan'ny Application Configuration Management Application (CMA).
CELUM dia namoaka mpitantana slide vaovao ho an'ny office.connect ary PowerPoint®. Ny rafitra dia afaka mampiditra mivantana ny sary mihetsika avy amin'ny fampisehoana iray na maromaro amin'ny fampisehoana ankehitriny. Soso-kevitra marobe avy amin'ny fampisehoana samy hafa dia azo fidina miaraka ary ampidirina ao amin'ilay fampisehoana. Ny mpampiasa dia manana ny fahitany ny fanovana rehetra natao tamin'ny famelabelarana namboarina ary mety ho ferana ny fidirana amin'ireo famelabelarana navoaka.
Endri-javatra amin'ny CELUM's Digital Asset Management:
Mora ny mampakatra sy mikaroka - Ampidino moramora - fampakaram-bady tokana, batch na tafiditra tanteraka. Mitadiava ny fanananao amin'ny alàlan'ny widget fitadiavana lava.
Fandehanana miasa - Ataovy mandeha sy araho ny fizotran'ny famoronana miaraka amina lahasa sy fifehezana ny kinova.
Mandrefy fahombiazana - Jereo izay votoatiny nahavita tsara tamin'ny fantsona izay - ampifanaraho ireo paikady amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo zavatra tiana sy fizarana atiny manokana.
Fitantanana zon'olombelona mandeha ho azy - Tantano ny fampiasana zony, arovy ny fahazoan-dàlana ary alaivo antoka fa misy ny fanararaotana ary voasoroka.
Angony ary atero - Mamorona sy manatitra fanangonana ho an'ny mpihaino isan-karazany miaraka amina fiarovana mba hiarovana ny atiny mora tohina.
Tantano izay karazana rakitra - Tantano izay karazana rakitra ary mahazoa fahaiza-manao toa ny fitrandrahana metadata, ny fiovam-po ary ny topi-maso mialoha ny tranonkala ho an'ny endrika 200 mihoatra ny fisie.
Atolory amin'ireo rafitra hafa - Izay atiny rehetra amin'ny rafitra rehetra - nohamarinina ho an'ny tambajotra sy fitaovana fandefasana atiny samihafa. Ny CELUM dia azo ampidirina amina rafitra misy amin'ny alàlan'ny API mahery.
Fanaraha-maso fidirana - Iray amin'ireo rafitra fanaraha-maso mahery vaika indrindra amin'ny fidirana amin'ny indostrian'ny fitantanana atiny. Ny fahazoan-dàlana nolovaina amin'ny lova dia mamela ny fizotran'ny fanekena sarotra amin'ny fahamorana tsy manam-paharoa.
Media sosialy sy atiny - Fampidirana sy fandrefesana ny fahombiazana
Sintomy ny Whitepaper an'ny CELUM: Maninona no mitaky DAM ny orinasanao
Tags: fitantanana marikafitaovana marikacelumfampiharana fitantanana fikirakiranatohodranon'ifitantanana fananana nomerikaformat filebirao.hitohyPower Pointslide powerpoint
Inona avy ireo loka malaza indrindra amin'ny fanomezanao fampiroboroboana?